Fadlan isticmaal foomka xiriirkeena
Waan soo sheegi doonaa sida ugu dhaqsaha badan!
Wixii su'aalo toos ah iyo macluumaad dheeraad ah waxaad naga heli kartaa halkan:
Hordhac: + 49 2131 4058 629
Waxaan difaacnaa xuquuqda aadanaha ee xaruntayada. Nagu soo booqo Berlin. Gardeschützenweg 71 - 101
Cinwaanka eMail (loo baahan yahay)
PixelHELPER Foundation | farshaxanka caaga ah ee Wannsee Berlin, Jarmalka
Waxaan u dagaalamaynaa adduun wanaagsan
Waad ku mahadsantahay xiisahaaga PixelHELPER. Robots of humanity waxay ku mahadsantihiin booqashadaada. Rootiyadaha 4 Our robot waxaa abuuray by farshaxanno noo for deeq bixiyayaasha waaweyn. Haddii aad go'aansato inaad na taageerto waxaad heli kartaa robot ahaan hadiyad ahaan. Farshaxaniinta waaweyn waa farsamooyin dhab ah oo farshaxan. Sida caag weyn oo ka samaysan papier-mâché, waxaad ku haboonaan kartaa sariiro kasta, xaflad ganacsi ama shirkadda xanaanada caruurta. Sidaas darteed haddii aad leedahay si aad noo sheegto wax gaar ah, ama aad jeclaan lahayd our urur deeq u soo dirto, waxaan rajeynaynaa in aan idin tusin fursadaha of our shaqo. artist Light Oliver Bienkowski iyo kooxdiisa dhisay carruurta meter 4 farshaxan Rafaa sare qosli oo keeni yaabeen. Xiddigeena Youtube Jörg Sprave wuxuu dhisay xayawaan kubadeed oo ubax ah. Dhammaan lacagaha ka soo baxa sawirada waxay tagaan ururkayaga samafalka. Waad ku mahadsantahay inaad naga taageerto.
Kontakt Janaayo 9th, 2020Oliver Bienkowski